Aeonium Factory, Suppliers - China Aeonium Manufacturers
17cm Pot Aeonium Plant "Goddess luo mage"
Imhando yakakura yepakati, pfuma yerudzi yakakosha, dormancy inogona kudzoka brocade, kukura musangano wakareba kuti ukwire brocade patsva.Nekuda kwehunhu uhu, kuchinjika kwakasimba, kwakakodzera nzvimbo dzakawanda dzekukura.
Rudzi rweChirimwa : Natural Plants
Atrribute: Nemapeto akakora
Zvimiro: Kusanaya kwemvura
Hupenyu hwose: Zviri nyore kubereka
Aeonium 'Mardi Gras
Aeonium 'Mardi Gras' chirimwa chakanaka chose chinobva kuAmerica.Iine mamwe mavara anoshamisa zvechokwadi uye zviratidzo zvinotaridzika zvinoshamisa gore rose.
Sezvo inokura inobvisa kuburitsa yakanaka diki shrub, mhedziso inofanirwa kune chero muunganidzwa.
Aeonium 'Medusa' ndeimwe yeaeoniums akanakisa akasiyana akambovapo.Inofungidzirwa kuti imhando yakasiyana-siyana yeAeonium 'Velor'.Nerunyerekupe rwemutambo kubva kuAeonium 'Velour' kubva kuHolland.
Aeonium 'Medusa' yave imwe yemhando dzinonyanya kutaurwa uye dzinotsvakwa pasirese.
Iyo variegation inoramba yakasimba zvakanyanya muchirimwa uye inobata yakanakisa fomu sezvainokura.Muchirimo, variegation inopisa ruvara rutsvuku, uye sezvo nguva yechando inosvika, mapeji ekunze ekusiya anoshanduka-creamy-white.Ingori musanganiswa wakanaka uye unoshamisa, kunyanya kana iyi Aeonim yasvika pakukura.
Aeonium 'Medusa' inokura zvakanyanya Sezvakaita Aeonium 'Velor' uye ichaita zvidimbu zvematavi pazasi pepakati rosette.Sekuziva kwedu, haina kukura yakakura seizvi zvichida nekuda kwechirimwa chiri variegation.Inogona kukura kusvika 45cm pakureba, uye 40cm yakapararira neakawanda akaturikidzana ekubvisa.
Iwe unogona kuona yakasviba variegation inoratidzika semakiyi echisikwa chengano cheGreek Medusa, aive nevhudzi rake rakashandurwa kuita nyoka sechirango chevamwari.
Aeonium Zvidyarwa Aeonium LilyPad
Aeonium LilyPad iri nyore kukura mabuds eparutivi, mashizha epasi ari nyore kusvava uye kuita mirwi yakawanda yekare, mashizha akakora uye akaumbwa nechipunu, shizha remuromo harisi pachena, uye chimiro chelotus chakanyatso kurongeka.Nemamiriro akafanana ekuchengetedza, mashizha akasvibira kusvika kune pink orenji girini, uye ruva reruva riri mudunhu rakanaka kwazvo, asi ruvara rwegirinhi rweruvara rweruvara rweruvara rweruvara rwegirinhi. murwi wekare wakanaka kwazvo.
Folding edit chikamu ichi chemaitiro ekurima
Aeonium LilyPad iri nyore kuchengetedza, iri nyore kukura kubva pasi pe lateral bud kuti iite murwi wekare wekare, nokuti iyo genus ye lotus palm, saka dormancy yezhizha inonyanya kuoneka, zhizha rinofanira kubhadhara mumvuri, zvishoma. yechiedza chakananga, kuve nechokwadi chekuti chirimwa hachina chinhu, kuparadzira keke kunogona kuva;Inofanira kudzora mvura, bheseni ivhu rakaoma, pamwe chete nebheseni pamwe nehuwandu hwemvura inogona kuva;Kufefetera kunofanira kusimbiswa; Zhizha dzivisa mvura, musoro kudiridza, kwenguva refu yakanyorova bheseni ivhu.Spring uye matsutso kukura mwaka, edza kupa chiedza chakakwana, chiedza zvakakwana, lily mashizha mashizha achave akaputirwa, akanyanya compact uye gobvu, ruvara runopa inoyevedza orenji pink girini, kusakwana chiedza, mashizha achaita. kuwanda kupararira, mashizha anoshanduka kuva akasvibira, ruvara rwemuriwo.Mwaka wekukura kwechirimo uye matsutso unogona kudiridzwa zvakaringana, basin ivhu rakaoma 70 kana 80 rinogona kudururwa zvakakwana, kudzivirira kuoma kwenguva yakareba, mwaka wekunaya kwemvura unofanirwa kudzivirira kwenguva refu. mvura inonaya, kudzivirira seeper kuora shizha.Kuitira lily lily kudyara, yakasununguka uye inofema svikiro inogona kusarudzwa, senge peat / kokonati bran, uye chikamu chevhu granular hafu nehafu.Chikamu chevhu chinogona kugadzirwa muzvikamu zvakasiyana zvichienderana nenharaunda yenzvimbo uye maitiro ekugadzirisa.